कालो फ्राइडे सबै क्षेत्रहरूमा पुग्छ र कला ग्यालरीहरू सामेल हुन्छन् क्रिएटिव अनलाइन
जुडित मर्सिया | | कलाकारहरू, सामान्य
यो शुक्रवार प्रसिद्ध छ "कालो शुक्रबार" वा स्पेनिश "ब्ल्याक फ्राइडे" मा यसको अनुवाद। यो एक शुक्रबार हो जसमा प्राय सबै क्षेत्रहरूमा व्यवसाय सुरू हुन्छ विशेष प्रस्तावहरु जसले उपभोक्ताहरूलाई क्रिसमस मौसमको उद्घाटन गर्न प्रोत्साहित गर्दछ। यो ध्यान दिनुपर्दछ कि धेरै जसो ब्रान्डले तिनीहरूको लम्बाइ लिन्छ हप्ता भर प्रदान गर्दछ। हामीले यो परम्परा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट अपनाएका छौं।
यो यस नामले चिनिन्छ किनकी यो समय मानिन्छ व्यवसाय रातो पार (आयको अभावको कारण) कालो संख्यामाभन्नुपर्दा, उपभोक्तावादको उदयबाट जुन यस समयमा प्राप्त भएको हो।
1 "ब्ल्याक फ्राइडे" स्पेन आइपुग्छ
2 ब्ल्याक फ्राइडेमा सामेल हुने क्याटालान ग्यालरीहरू
3 काला शुक्रवार 2017
4 काला शुक्रवार 2016
5 कला किन्नको लागि अन्य विकल्पहरू
"ब्ल्याक फ्राइडे" स्पेन आइपुग्छ
यो धेरै अमेरिकी परम्परा २०१० मा स्पेनमा प्रसिद्ध हुन थाल्यो। यो टेक्नोलोजी कम्पनी थियो एप्पल जसले यस घटनालाई हाम्रो देशमा निर्यात गर्ने निर्णय गरे, जसमा धेरै ब्रान्ड सामेल छन्। प्रस्तुत छन् अपूरणीय छुट, र अधिक र अधिक क्षेत्रहरू उत्साहित छन्। ती मध्ये एक जसलाई हामी हाइलाइट गर्न चाहन्छौं त्यो हो कला, को ग्यालरीहरु क्याटालोनियाको ग्यालरीहरूको गिल्ड तिनीहरू एक प्रमोशन पहल संग ब्यान्डवगन मा कूद। २०१ In मा उनीहरूले पहिले नै २१% मा मूल्य घटाएर त्यसो गरेका थिए, त्यो हो, लागू गरिएको भ्याट्को प्रतिशत। यस वर्ष उनीहरूको मूल्यमा फेरि प्रस्ताव छ।
ब्ल्याक फ्राइडेमा सामेल हुने क्याटालान ग्यालरीहरू
अब हामी यसको सूची छोड्नेछौं बार्सिलोना ग्यालरीहरु जुन प्रचारको यो दिन सामिल भयो जहाँ हामी ठूलो छुटको फाइदा लिन सक्छौं। यस मार्केटिंग रणनीतिको साथ तपाईंसँग नयाँ दर्शकहरूलाई आकर्षित गर्ने र तिनीहरूलाई कलाको नजिक ल्याउने लक्ष्य.
वर्षौं पहिले, जस्तो कि हामीले पहिले नै उल्लेख गरिसक्यौं, कला ग्यालरीहरू पनि यस पहलमा सामेल भए र उनीहरूको सफलताका लागि धन्यबाद जुन उनीहरूले वर्षौं बर्ष दोहोर्याईरहेछन्। घटनाहरू र छुटहरू साँच्चिकै सुन्दर छन्, के आयोजित गरिएको थियो पत्ता लगाऔं।
काला शुक्रवार 2017
जोर्डी बर्नाडास ग्यालेरी (Consell de Cent, 347 XNUMX - Eixample), हामी छुट पाउन सक्छौं जुन छुट five र percent० प्रतिशत बीचमा छ।
आर्टुर रमन कला (बेलियन, १ 19 - बार्सिलोना), यो पारिवारिक परम्परा सहितको ग्यालरी हो, यसको उत्पत्ति पुरानो डिलरमा जान्छ। यो ठूलो प्रतिष्ठाको साथ यस्तो ठाउँ हो जहाँ तपाईं उच्च गुणहरू कामहरू पाउन सक्नुहुन्छ।
La गोथस्ल्याण्ड ग्यालेरी (Consell de Cent, 331 2017१ - Eixample), अर्को बर्षमा सम्मिलित हुन्छ क्याटलन चित्रकला र ऐतिहासिक अवन्त गार्डेसको चयन प्रस्ताव। २०१ 28 मा, यो ब्ल्याक फ्राइडेसँग मिल्दोजुल्दो छ र रामन क्यासस प्रदर्शनी फेब्रुअरी २ until सम्म चलिरहेको थियो।
काला शुक्रवार 2016
La गोथस्ल्याण्ड ग्यालेरी २०१ 2016 मा मैले चित्रकार र मूर्तिकार मानुएल बी द्वारा कागजमा दर्जनौं कार्यहरू गरे जसमा छुट लागू गरियो।
आर्टेविस्टास ग्यालेरी (Passatge del Crèdit, - - Ciutat Vella), समकालीन कलामा विशेषज्ञ छन्।
कला सर्कल (प्रिन्सेसा, --२ - सियट्याट भेला), कलेक्टर्स क्लब हो जसले आफ्ना सदस्यहरू र ग्राहकहरूलाई मौलिक ग्राफिक कार्यहरू प्रदान गर्दछ। तिनीहरू प्राय: समकालीन कला, ललित कला फोटोग्राफी, र सचित्र संग्रहकर्ता पुस्तकहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ।
En ओलिवर्ट आर्ट गैलरी, एक कार्यक्रम आयोजना गरियो जसमा हामीलाई पियानोवादक जियानकार्लो बोन्फन्तीले लाइभ कन्सर्ट सुन्ने सुअवसर पाएका थिए, त्यस पछि नारिया आर्मेंगोल र मग्दा भेगा दा कोस्टाको कविता थियो।
La सुबेक्स ग्यालेरीप्रदर्शनमा कार्यहरूमा २१% छुटको साथसाथै, यसले सुविधा प्रदान गर्ने पेन्टि courses कोर्सहरूको लागि दर्ता शुल्कमा पनि त्यस्तै छुट बनायो।
कला किन्नको लागि अन्य विकल्पहरू
यो 2018 निश्चित लागि कला यस पहलमा सामेल हुन्छ, र यदि तपाईं बार्सिलोनाबाट हुनुहुन्न भने पनि धेरै शहरहरूले सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गर्छन्। साथै, हामी वर्तमानमा अवस्थित सब भन्दा शक्तिशाली उपकरणको बारे बिर्सन सक्दैनौं। को अनलाइन कला ग्यालरीहरु तिनीहरूले हामीलाई सबै बजेटमा अनुकूलित कला खरीद गर्न अनुमति दिन्छ।
यो निस्सन्देह हो दुबै कला प्रेमीहरूको लागि र सुरू गर्न चाहने सबैको लागि। विशेष घटनाहरू जुन प्राय: स्वतन्त्र हुन्छन्, हामीलाई आउँदै गरेको यस सप्ताहन्तमा खोल्नुहोस् रaको नजिक आउनुहोस् सांस्कृतिक वातावरण जसमा यो पक्कै समृद्ध हुनेछ। थप रूपमा, कला दिने विकल्पलाई अस्वीकार गर्नु हुँदैन, र क्रिसमसको साथ कुनातिर हामी क्रिसमस शपिंगलाई अगाडि बढाउन सक्दछौं। संकोच नहुनुहोस् र तपाईंको नियमहरूको साथ अधिक रचनात्मक हुनुहोस्!
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ब्ल्याक फ्राइडे कला ग्यालरीहरु हिट